4th January, 2022 Tue ०९:२३:२३ मा प्रकाशित
‘पुष्पा–द राइज’ ले दर्शकलाई निकै मनोरञ्जन दिइरहेको छ । साउथ सुपरस्टार अल्लु अर्जुनको स्टाइलले पनि मानिसलाई मन पराएको छ तर यसको पछाडि अल्लु अर्जुनको कडा मेहनत छ, जसका कारण उनको काँधमा अझै पनि दुखाइ छ । यही चलचित्रकाे बिषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः
काँध उठाउने र दाह्री हान्ने शैली फिल्ममा राम्रो देखिन्छ, यो कस्को आइडिया थियो ?
यो मेरो र निर्देशकको विचार थियो। मैले यो झगडाको शटको बीचमा गरेँ, त्यसपछि निर्देशकले यो देखे र भने कि यो धेरै राम्रो छ, हामी गर्छौं। मैले भनेँ-तिमी यसो गर्छौ ? उसले भन्यो-हो, पर्दामा गर्दा राम्रो लाग्यो। त्यसैले फिल्ममा धेरै पटक उनले दाह्री खौराउन स्टाइल गरेका छन् ।
तपाईंको शरीरको भाषा चरित्रको जस्तो छैन। तीन घण्टाको फिल्ममा कसरी राख्नुभयो ?
बडी ल्यांग्वेजका लागि निर्देशकले मलाई केही युनिक बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिएको भनिरहेका थिए । जसलाई थिएटरमा देखेर मान्छेहरु तिमी जस्तै हिड्न थाले । जे गरे पनि ल्याउ । त्यहाँ तीन-चार विचारहरू थिए, तर यो काँध उठाउने विचार राम्रो लाग्यो। एक काँधमाथि राख्दा अलि फरक र फरक महसुस हुन्छ र यसमा अलिकति वीरता छ। यो तीन घण्टाको होइन, यो दुई वर्षको कडा परिश्रम हो। काँध अझै दुख्छ।
परिवारमा सबैभन्दा ठूलो आलोचक को हो ?
सबैले एकदमै साथ दिनुभएको छ । तैपनि केही भन्नैपर्छ, त्यसपछि बोल्छन् । बुबा ठूला निर्माता हुनुहुन्छ, त्यसैले फिल्म हेरेपछि बोल्नुहुन्छ । मेरा नजिकका साथीहरू छन्। मेरो श्रीमती छ । केटाकेटी पनि बोल्छन्, कुनै कुरा मन पर्‍याे भने राम्रो छ, राम्रो होइन भन्छन् । अब मैले यी कुराहरू लिनुपर्छ।
रिलिजपछि फिल्मबाट एउटा दृश्य काटियो । यसबाट फ्यानहरुको असन्तुष्टि रहेको सुनिएको छ । के भन्नु हुन्छ ?
होइन, त्यस्तो केही थिएन । यो लम्बाइको लागि अलि काटियो। त्यो दृश्य कथाको लागि महत्त्वपूर्ण थिएन। यदि यो छ भने यसले काम गर्नेछ, तर यदि यसलाई हटाइयो भने चित्र छिटो चल्छ। त्यसैले एउटा दृश्य हटाइयो। यसले कुनै फरक पार्दैन।
तपाई‌ंलाई फ्यान मल्लु अर्जुन पनि भनिन्छ । यसको नाम कसरी आयो ?
धेरै मलायालीहरूले मेरो तेलुगु चित्र धेरै हेर्छन्। उहाँहरूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। मेरो तस्वीर केरलामा धेरै चल्छ। त्यसैले मलाई मायाले मल्लु अर्जुन भन्छन् ।
ठीक छ, तपाईको पहिलो क्रस के थियो ?
म बिबाहित छु घर जानुपर्छ । श्रीमती र छोराछोरी देख्नेछन्। तिमि के बोल्दै छौ। झगडा श्रीमतीसँग मात्र होइन, सन्तानसँग पनि हुन्छ ।
पहिलो पटक क्यामेरा अगाडिको अनुभव कस्तो रह्यो ?
मेरो पहिलो फिल्म गंगोत्री थियो । यसको निर्देशक के। राघवेन्द्र राव थिए उनीहरु क्यामेराको कुरा गरिरहेका थिए, त्यसैले म एक्सन गरिरहेको थिएँ । म कारबाही अघि कार्य गर्दै थिएँ। त्यसपछि उनले कर्म बोल्छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन, त्यसैले त्यसपछि मैले कर्म गर्नुपर्छ । पहिलो एक-दुई शट यसरी भयो कि उसले क्यामेरा बोल्छ र म कारबाही गर्न थाल्थें। क्यामेरा बोल्यो भने कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । कर्म गरेपछि कर्म गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन ।